पटक-पटक टन्सिलको समस्या देखिन्छ ? सामान्य नसोच्नुहोस्, बिगार्न सक्छ मुटु – Sandesh Press
January 4, 2021 187
काठमाडौँ । मौसम परिवतनसँगै विभिन्न किसिमका संक्रमणले आक्रमण गर्ने गर्छ । संक्रमणका कारण शरीरमा दैनिक समस्या आउँछ । जसले शरीरमा समस्या उत्पन्न भई दैनिक कार्य संचालनमा समेत बाधा निम्त्याउँछ ।
टन्सिलाइटिस पनि एक प्रकारको संक्रमण हो । जुन हाम्रो घाँटीमा हुने गर्दछ । प्राय गरी टन्सिलाइटिस विभिन्न किसिमका किटाणु तथा जीवाणुहरुको संक्रमणले हुने ग्राण्डी अस्पतालका नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डा। आन्नद घिमिरे बताउँछन्।
टन्सिलाइटिस भएपछि घाँटी सुन्निने र दुख्ने गर्छ । यसले गर्दा खान पिउन गाह्रो हुन्छ र बोल्न पनि सहज हुँदैन । यसको जटिल पक्ष भनेको धेरै पटक सम्म टन्सिलाइटिस भयो भने मुटुको भल्व नै बिग्रने सम्भावना बढेर जाने भएकोले समयमै उपचार गर्न र सावधानी अपाउन डाक्टर घिमिरेको सुझाव छ ।
टन्सिलले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गर्दछ । टन्सिलबाट लिम्फोसाइट र मोनोसाइट नामक दुई कोषको निर्माण हुन्छ जुन हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको महत्वपूर्ण अंश हो ।
यसका साथै टन्सिलले म्याक्रोकाज नामको कोष पनि निर्माण गर्दछ । यो कोषले शरीरभित्र प्रवेश गरेका जीवाणुलाई नष्ट गरेर हामीलाई रोग लाग्नबाट बचाउँछ। कान दुख्ने, टाउको दुख्ने, सम्पूर्ण शरीर गलेको र दुखेको अनुभव हुनु, कब्जियत र पेट दुख्ने समस्या पनि तीव्र टन्सिलाइटिसमा देखा पर्न सक्छन्।
घाँटीबाट संक्रमण कानको नलीमा सर्न सक्छ
नाक र साइनसको बराबर संक्रमण भएमा टन्सिलमा असर पर्छ, नाकको सिँगान वा अन्य रस अगाडि निस्कनको सट्टा पछाडिपट्टि बगेमा पनि यो हुनसक्छ
घाँटीलाई असर पार्ने तत्वहरू जस्तै– धुवाँ, रसायन वा धुलो आदिबाट जोगिने।
Prevकपाल झर्ने समस्याले हैरान हुनुभयो ? मेथि र दही मिसाएर लगाउनुहोस्, नतिजा आफै देख्नुहुनेछ
Nextघट्यो प्याजको भाउ
डरलाग्दो दुर्घटना ,एक जनाको घटना स्थलमै मृत्यु